बादललाई अध्यक्ष बनाउनु पर्छ : गोपाल किराँती
भन्नेले त प्रचण्ड भनेकै ज्ञानेन्द्र शाह हो पनि भनेका थिए । नेतृत्वको तहमा वार्ताका निम्ति समझदारी, छलफलहरु विभिन्न ढंगले भइरहेका थिए । त्यो आवश्यक पनि थियो । जसरी माओत्से तुङले एकातिर युद्ध गरिरहेका थिए भने अर्कोतिर संयुक्त मोर्चाको पहल पनि गरिरहेका थिए । त्यसकारण यस्ता कुरालाई अन्यथा मान्न जरुरी छैन ।
आफैं ‘लालगद्दार’ भन्ने, आफैं अंकमाल गर्न जाने ! : सिपी गजुरेल
एउटा पार्टीको अध्यक्ष नै यो प्रक्रियामा नभएको अवस्थामा यसलाई पार्टी एकता नै भन्न मिल्दैन । केही व्यक्ति जाने भन्ने कुरा हो । यसलाई आत्मसमर्पण भन्न सकिन्छ । केही व्यक्तिलाई हतारो लाग्यो, जान इच्छा लाग्यो वा यस्तै अन्य कारणले उहाँहरु जान लाग्नु भएको हो ।
हामीले संघीयताको विरोध गर्दा उनीहरुलाई लुतो कन्याइदिएजस्तै हुन्छ : चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी संघीयता विरोधी नेताका रुपमा चिनिन्छन् तर उनी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण मन्त्री पनि हुन् । संघीयतासहितको जारी संविधान कार्यान्वयनको दायित्व बोकेको सरकारमा सहभागी भएर उनले आफ्ना अडानलाई बढी महत्व दिन्छन् या संविधानमा उल्लेखित मुद्दासामू समर्पण गर्छन् ? आम चासोको विषय हो ।
कांग्रेस रहेन भने नेपाल रहन्छ की रहँदैन भन्ने विश्वलाई चिन्ता छ: डा.नारायण खड्का
म चिनिएको कार्यकर्ता हुँ, कसैको कित्तामा हुनुपर्छ भन्ने छैन: रामनाथ अधिकारी
महाधिवेशन पछि पार्टीमा अनेक चुनौती आाउँछन : रेवतीप्रसाद भूसाल ,पूर्व केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
नेतृत्व रहरको कुरा होइन : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ,केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
‘नोक्सानीको सानो अंशमात्र विमा गरिएको रहेछ’
नेपालमा विमा बजार कस्तो छ र विमा कम्पनीहरुका सामू के–कस्ता चुनौनि छन् भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढ्नु स्वाभाविक नै हो । प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रीत रहि एनएलजी इन्स्योरेन्सका कार्यकारी प्रमुख विजयबहादुर शाहसँग गरिएको कुराकानी :